Julayi 2019 | Londoloza Isitimela
Inyanga: Julayi 2019
Ikhaya > Julayi 2019
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Akukho uthi iholidi noma iholide, into efana epaki amanzi, awucabangi? Sunshine, ukhilimu oyiqhwa, ngokuhambisa phansi abanye amaslayidi amanzi omkhulu iresiphi ultimate kumnandi ngesikhathi Amaholide Summer! Senze umsebenzi onzima wokuhlola amaBest Water Parks…
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi Uma usuyitholile induduzo, lula, futhi okumangalisayo okujwayelekile kokuhamba ngesitimela, kungcono ukubuya nzima ukuphila oyi-wesitimela. Ikakhulu lapho ukhuluma mayelana Kuhle European imizila isitimela ehlobo. A izwekazi igcwele imizila ebabazekayo, namathafa amadlingozi, and a surplus of incredible destinations…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Lovers yobuciko yesimanje ezindaweni eziningi ukuvakashela e-Europe. With ngcebo oluthandwa, mhlawumbe esinzima kunazo ingxenye ukhethela uya khona. Nokho, uma ufuna ukuvakashela ezidonsela prime yaseYurophu lujula kwezobuciko, kungani ungahleli uhambo lwakho lokuzungeza ke?…
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Ukuhamba ngesitimela kungaba enye yezindlela ezingcono kakhulu ukuthola izwe elisha - umoya ukuthutha yakho, ubukele roll kwenkundla ngu. Ubathola futhi indlela engcono kakhulu ukufinyelela The izindawo Instagrammable kakhulu eYurophu! Uma kuziwa ukuhamba, yakho…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Europe ugcwele UNESCO amasayithi ukuheha izigidi zezivakashi. Kukhona ezihlukahlukene izindawo ongazibona - kusuka esikhumbuzo yezakhiwo kanye namasiko ukuze izimangaliso zemvelo we Izwekazi Old. Nge ezindaweni eziningi kangaka ongakhetha kuzo, kungaba nzima…
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi Uma kuziwa izwekazi njengoba ngamasiko nhlobonhlobo njengoba Europe, ungakwazi ukugembula emasikweni ukudla asalokhu ezihlukahlukene! Uma uzimisele inselelo ikhono lakho phansi zonke izinhlobo ezithakazelisayo (sisebenzisa ukuthi isiphawulo euphemistically lapha) yokugibela, bese ubheka…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Yisikhathi sokuthi uthole labo izigqoko party futhi stomping amabhuzu igcwele! Sesikhathele afuna imikhosi Kuhle eYurophu nase kuphi. Ingabe ukulungele ukuya emaphathini indlela yakho ngokusebenzisa Summer? 🙋🏻 Lo mbhalo ubhalelwe ukufundisa ngeTrain Travel…